Fampidirana ny Fizarana 14 | Tantara ao Amin’ny Baiboly
Nitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana hatrany lavitra be ny Kristianina voalohany. Natoron’i Jesosy an-dry zareo hoe aiza avy no hitoriana. Nanao fahagagana koa i Jesosy dia afaka nampianatra olona samy hafa fiteny ry zareo. Nampian’i Jehovah ry zareo, dia lasa sahy nitory sy tsy nivadika na dia nenjehina mafy aza.
Nahazo fahitana avy tamin’i Jesosy ny apostoly Jaona, dia hitany ny voninahitr’i Jehovah. Hitany koa fa resin’ilay Fanjakan’ny lanitra i Satana ka foana ny fitondrany. Hitany koa i Jesosy sy ny 144 000 miara-manjaka aminy, sy ny tany lasa paradisa ary ny olona rehetra manompo an’i Jehovah sady mihavana sy miray saina.
Manome voninahitra an’i Jehovah isika rehefa manao ny asa asainy atao
Resaho amin’i Jehovah hoe hatokanao ho azy ny fiainanao, dia asehoy aminy hoe te ho lasa vahoakan’ny Fanjakany ianao
Ataovy namana akaiky indrindra i Jehovah
Lasa nahay nanao inona ny mpianatra rehefa nahazo fanahy masina?
Efa namono an’i Jesosy ho faty ny mpitondra fivavahana, dia izao indray tsy navelany hitory intsony ny mpianatr’i Jesosy. Mbola nitory foana anefa ry zareo.
Nanenjika mafy an’ireo Kristianina i Saoly. Niova anefa izy.
Nahoana no nasain’Andriamanitra nankany amin’io lehilahy tsy Jiosy io i Petera?
Nitory hatrany lavitra be ny apostoly Paoly sy ireo namany.
Mahaliana ity tantara ity fa voaresaka ao daholo na demonia, na horohoron-tany, na sabatra.
Mpinamana be sy niara-niasa nandritra ny taona maro izy roa lahy.
Be dia be ny loza teny an-dalana. Tsy nisy nahasakana an’i Paoly anefa ireny.
Nampisehoan’i Jesosy fahitana maromaro momba ny hoavy izy.
Resahin’ny bokin’ny Apokalypsy hoe inona avy ny fiovana hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany.